स्थानीय तहको चुनावमा जनताको भूमिकाबारे
१) संविधान कार्यान्वयनमा योगदानको अनिवार्य आवश्यकता
कुनै चलखेल भएन भने आगामी २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव हुने सम्भावना बढी छ । अधिकार र सहभागिताबारे जतिसुकै कुरा गरिएको भए पनि जनताको राज्य सञ्चालनमा सार्वजनिक पहुँच र नेतृत्वको साह्रै चिन्ताजनक स्थिति कायम रहेको कैयौँ वर्षपछि यो चुनाव हुन गइरहेको छ । यसका साथै नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयनको पहिलो प्रयास स्वरूप यो निर्वाचन हुन गइरहेकोले यसको ऐतिहासिक महत्व छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा व्यवस्था भएका गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता लगायतका कैयौँ महत्वपूर्ण प्रावधानहरूलाई राजनीतिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक संस्कारको रूपमा संस्थागत गर्नका लागि संविधानलाई कार्यान्वयनमा लैजान जरुरी हुन्छ । यदि यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने आगामी दिनहरूमा मुलुकले प्रतिगमनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा जनताका सम्पूर्ण अपेक्षाहरूलाई सम्वोधन गरिएको भन्न सक्ने स्थिति नभएपनि यसमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानहरूबाट अप्ठेरोमा पर्न गएका विखण्डनकारी र क्षेत्रीयतावादी तत्वहरूले वर्तमानमा जुन माग उठाइरहेका छन्, त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि कमसेकम संविधानमा देश विखण्डनका लागि संविधानमा वैद्यानिकता छैन । त्यही व्यवस्था नभएको वैद्यानिकतालाई संविधानमा लिपिवद्ध गर्नका लागि भइरहेका प्रयासहरूले सफलता हासिल गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने मुलुकको अधोगति शुरु हुनेछ । नश्ल, जात, धर्म, क्षेत्र आदि अधिकारको माग गर्नेहरूले देशलाई अशान्ति र विश्रृङ्खलतातर्फ लैजाने कुरा सुनिश्चित छ । संविधान कार्यान्वयनको विषय जति टाढा हुँदै जान्छ, त्यति त्यति प्रतिगमनको वातावरणले मूर्त आकार ग्रहण गर्ने स्थिति बन्दै जानेछ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका कैयौँ जनपक्षीय वा लोकातान्त्रिक विषयहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिनका लागि भएका प्रयासहरूलाई असफल बनाउन संविधानको कार्यान्वयन नै एउटै मात्र वैज्ञानिक तरिका हुन्छ । देशलाई विखण्डित र विश्रृङ्खल गरी मुलुकको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पार्ने जो कोहीका पनि योजनाहरूलाई असफल बनाउनु आवश्यकता छ । जस्तो कि मधेशवादीहरूले भनिरहेका छन् कि आफूले भने अनुसार भएन भने नेपालबाट मधेश नै गुम्न सक्ने छ । वास्तवमा यस प्रकार राष्ट्रघाती र विखण्डनकारी अभिव्यक्ति दिइरहेका मधेशवादीहरूसित सहमति खोज्ने वर्तमान सरकारको रवैया शङ्कास्पद देखिन्छ । कुरा कुर्सी र सत्तालोलुपतासम्म मात्र सीमित नभएर अर्कै शक्तिकेन्द्र(जसले नेपालको सार्र्वभौमिकतामाथि आक्रमण गर्दै आइरहेको छ)सम्म फैलिएको आभाष हुन्छ । नत्र पूरा देश मुठ्ठीभरका तत्वहरूको मागका कारण वन्दी हुन पर्ने कुनै कारण हुँदैन । एकातिर, सरकारको अकर्मण्यतामा विदेशी शक्ति र तिनका दलालहरूले चलखेल गरी नेपालमा संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र अस्थिरता उत्पन्न गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । अर्कोतिर, धर्म निरपेक्षताको विरुद्ध कट्टर हिन्दूवादीहरूले गरिरहेको प्रयासले पनि मूर्त आकार ग्रहण गर्न सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । उनीहरू लगातार रूपमा साम्प्रदायिक र धार्मिक राजनीतिलाई तीव्र पार्ने कोशिसमा लागिरहेका छन् । यसरी विभिन्न पक्षहरूले २०६२÷६३ का आन्दोलनका उपलब्धीहरूलाई समाप्त पारी प्रतिगमनलाई निम्त्याउन कसरत गरिरहेका छन् । जति जति अस्थिरता बढ्दै जान्छ त्यति त्यति प्रतिगमनकारी र विखण्डनकारी तत्वहरूले आफ्नो स्थितिलाई बलियो बनाउनका लागि अवसर प्राप्त गर्दछन् । यसर्थ संविधानको कार्यान्वयनमा देशका निम्ति जनताले महत्वपूर्ण ढङ्गले योगदान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने परिवर्तन र अधिकारका लडाइँहरू जनताले नै लडेको कारण तिनको सुरक्षा र सम्वद्र्धन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पनि जनताको नै हुन्छ । त्यस दृष्टिबाट पनि यो निर्वाचनको महत्व हुन्छ ।
(२) विवेकपूर्ण निर्णयको आवश्यकता
संविधानको कार्यान्वयन भएर राजनीतिक स्थिरता कायम भएको खण्डमा देश, जनता र राजनीतिक क्षेत्रलाई समेत फाइदा हुने छ । तर यो भन्न सकिन्न कि देशमा राम्रो राजनीतिक परिपाटीको शुरुवात हुनेछ । किनभने देशमा हाल सत्तामा समेत वर्चस्व कायम गरेका वा गर्न सक्ने राजनीतिक शक्तिहरूलाई जनताले स्थानीय तहमा पनि निर्वाचित गर्ने पुगे भने देशको अहिलेको तस्वीर स्थानीय तहमा पनि स्थापित हुने छ । जनतासित धारे हात लगाउने वा आफ्नो छनौटप्रति पश्चाताप गर्ने बाहेकको विकल्प नहुन पनि सक्दछ । राजनीतिक नेतृत्व जनताको राजनीतिक निर्णय र विचारको प्रतिविम्व भएकोले धारे हात लगाएर मात्र दायित्व पूरा हुँदैन । त्यसैले छनौट गर्ने बेलामा उचित निर्णय गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई स्थापना गर्नुपर्दछ । यदि यस कुरामा जनताले उचित निर्णय गर्न सकेनन् भने त्यसको परिणाम हुनेछ— राष्ट्रिय राजनीतिका खलनायक शक्तिहरूको स्थानीय राजनीतिमा पनि निरन्तरता । वर्तमान सन्दर्भमा शक्ति केन्द्रमा रहेका राजनैतिक शक्तिहरूको अकर्मण्यता र कौशलहीन नेतृत्वका कारणले मुलुकले खराव समयबाट गु्रजिनुपरिरहेको कुरा कुनै लुकेको कुरा होइन । स्थानीय निकायहरूमा यस्ता चरित्रका राजनीतिक शक्तिहरूलाई स्थापित गर्नु भनेको यथास्थितिको चक्रव्यूहमा फसिरहनु हुनेछ ।
हामीलाई सबैलाई थाहा छ कि हालसम्म नयाँ संविधानको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसरी संविधानको कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा सत्ताप्रतिको तीव्र मोह भएको राजनीतिक नेतृत्वले शासन सत्तामा स्थान लिनु हो । बहुदलीय व्यवस्थाको सामान्य सुझबुझ भएको शासक वा राजनीतिक नेतृत्वले त्यस अनुसारका आदर्शहरू स्थापना गरेर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको चाहनालाई उचित ढङ्गले समायोजन गरी राजनीतिक नेतृत्वले निकास दिनुपर्ने हो । तर नेपालमा त्यस प्रकारको स्थितिको सदैभ अभाव रह्यो । सत्ता स्वार्थका लागि जस्तोसुकै पनि सम्झौता र साँठगाँठ गर्ने चरित्रका कारण नेपालमा सत्ताको राजनीतिक नेतृत्व पङ्गु र अकर्मण्य भइरह्यो । तर पनि जनताले त्यस प्रकारको नेतृत्वलाई सत्तामा स्थापित गरिरहने प्रवृत्तिले गर्दा नेपालमा भरोसा गर्न लायक राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेन र यस्तै स्थिति कायम रहेसम्म त्यस प्रकारको वातावरण प्राप्त हुन सम्भव पनि छैन । यस प्रकारको स्थितिको लागि जनता पनि उत्तरदायी हुन्छन् । राजनीतिको बुई चढेर कतिपय मानिसहरूले आफ्नो दूनो सोझ्याउनुसम्म सोझ्याएका हुन्छन्, तर पनि राजनीतिलाई सत्तोसराप गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो खालको प्रवृत्तिबाट स्वार्थीहरूको मात्र जमघट हुने सम्भावना हुन्छ । तर दायित्ववोध र जिम्मेवारी वहन गर्ने कुरा हुँदैन । यसकारण जनतामा यस प्रकारको प्रवृत्ति नहुनु नै राम्रो हुन्छ । किनभने जनताको निर्णयमा नै राजनीति कस्तो बनाउने भन्ने कुराको तय हुन्छ । सत्ता, सरकार र राजनीतिक नेतृत्व जनताको विवेक र निर्णयको प्रतिविम्व हो । यस अर्थमा जस अपजसको भागिदार जनताले पनि बन्नुपर्दछ । जनताको सहयोगविना कसैले पनि केही गर्न सक्दैन । तानाशाहहरू, फासिष्टहरू वा न्यायपूर्ण शासनसत्ता सञ्चालन गर्नेहरू सबैले जनताको सहयोग लिएर नै राजनीतिक भूमिका खेल्ने गर्दछन् । सबैलाई जनताको सहयोगको आवश्यकता पर्नुको कारण हो— जनता नै वास्तविक वैद्यानिक शक्ति र आधार हुन् । त्यसैले कुनै पनि किसिमले कुनै पनि शक्तिलाई जनताबाट अनुमोदित हुन जरुरी हुन्छ । जनताले जान अन्जानमा गर्ने निर्णयको भर्याङबाट चढेर बिभिन्न शक्तिहरू वा व्यक्तिहरू शक्तिको केन्द्रमा पुग्दछन् । त्यसरी पुग्नेहरू जनपक्षीय भएमा देश, जनता वा मानवजातिको नै हित हुन्छ तर तिनीहरू वदमास र राजनीतिक फिक्सिङ गर्ने भए भने मुलुक वा समग्र मानवजातिका लागि नै अभिषाप हुन्छ । त्यसैले जनताले निर्णय गर्ने बेला नै विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।
(३) विचार, विवेक र निर्णयमा परिवर्तन गर्न आवश्यकता
सिक्किमको भारतमा विलय हुने बेलामा लेण्डुप दोर्जेको पार्टीका मतदाताहरूले कस्तो महशूस गरेका थिए होला ? राष्ट्रघातका लागि पक्कै पनि जनताले आफ्नो मतको प्रयोग गरेका थिएनन् तर घटनाहरूले त्यस्तै पुष्टि गरिरहेका थिए कि जनताको भारी मत पाएर विजयी बनेको पार्टीले सिक्किमको स्वतन्त्र अस्तित्व र पहिचान समाप्त गरिसकेको थियो । मानौँ जनताले यही अभिभारा पूरा गर्नका लागि नै सो पार्टीलाई विजयी बनाएका थिए । मतदाताहरूले आफ्नो देशलाई माया गर्थे भने त्यो मतदानको निर्णय र विवेक अब पश्चातापमा रूपान्तरण भएको थियो । तर यति बेलासम्म धेरै ढिला भइसकेको थियो । सिक्किमे जनताको न आफ्नो देश थियो, न आफ्नो नेतृत्व नै थियो । उनीहरूको देश ‘महान् भारत’ बनिसकेको थियो ।
माथि उल्लेखित प्रसङ्गको उठाउनुको मुख्य उद्देश्य हो— नेपालमा पनि जनताले विवेक, विचार र निर्णयबारे विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । एकातिर, देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नागरिक असुरक्षा, अस्तव्यस्त प्रशासन र गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वका कारण मुलुकले उँभो लाग्ने स्थिति कहिल्यै पनि श्रृजना भएन । लामो समयदेखि यिनै राजनीतिक शक्तिहरू (जो अहिले पनि सत्तामा वा त्यसका वरिपरि रहेर नेपाली समाजमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भइरहेका छन्)ले नेपालको राजनीतिमा शासन सत्ता चलाउँदै आएका छन् । उनीहरूकै नेतृत्वमा मुलुकको यो स्थिति भएको छ । वास्तवमा आन्दोलन र सङ्घर्षमा नेपाली जनताको संयुक्त कुर्वानी भएको भएता पनि सत्ता र सुविधाको लुट भने यिनैले गरेका छन् । यिनीहरूको लुटका कारण नेपाली जनताको आर्थिक जीवनस्तर भयानक एवम् कष्टप्रद बन्न गयो भने केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर नवधनाढय वर्गमा रूपान्तरण भयो । तर पनि जनताबाट उचित निर्णय हुन नसकेका कारण पटक पटक तिनै राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्दै आइरहेका छन् । भ्रष्टाचार र लुटका अनेक पात्रहरू खडा गर्ने राजनीतिक शक्तिहरूले मुलुकका लागि योगदान दिन सक्दैनन् भन्ने ज्ञान जनतालाई हुनु आवश्यक छ । अर्कोतिर, जातीयता, क्षेत्रीयता र धार्मिकताको राजनीतिले मुलुकलाई अस्थिर बनाउने वा अस्तित्व नै समाप्त पार्ने प्रयासहरू भइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रियताको सङ्घर्ष लड्ने शक्तिप्रति उदासीनता राख्नु र विवेकको प्रयोग गरी उचित निर्णय गर्न नसक्नु जनताको कमजोर पक्ष हो । यस्तै अवस्था ठीक छ भन्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने जनताको उक्त विवेकलाई उचित र सही मान्न सकिन्न । आस्था र विश्वास राष्ट्रघाती र भ्रष्टाचारीहरू शक्तिमा पुग्ने भर्याङ नबनी देश तथा समाजको हित गर्ने अस्त्र बन्न सक्नुपर्छ । त्यसैले जनताको विवेक प्रयोग गर्ने परम्परा र शैली तथा निर्णय गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । विचारमा उत्कृष्टता आउनु स्वागतयोग्य हुन्छ तर पलायन र सम्झौतावादी भएर तथाकथित आफ्नाहरूलाई रोज्ने प्रवृत्तिलाई जनताले बदल्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा मात्र देशका बिभिन्न राजनीतिक निकायहरूमा राम्रो र निष्कलङ्क छवि भएका राजनीतिक शक्तिहरू स्थापित हुन पुग्दछन् । खालि तात्कालीन लाभ वा राज्यको कोष दुरूपयोग गरी होहल्ला मच्चाइएका विकासे गतिविधिका पछाडि लागेर होइन कि देशलाई दीर्घकालिन रूपले नै फाइदा पुग्ने गरी जनताले निर्णय गर्न सक्नुपर्दछ । जनताको विवेक र निर्णयले नै देशको अवस्थाको निर्धारण गर्ने भएकोले उनीहरूले आधारभूत दायित्वको सही ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्दछ । देश कस्ता शक्तिहरूको हातमा वा पहुँचमा रहनुपर्छ ? यो प्रश्नलाई ध्यानमा राखेर जनताले अव हुन थालिरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आफ्नो भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ । हामी आशा गर्दछौँ कि नेपाली जनताले सिक्किमे जनताकोभन्दा फरक ढङ्गले निर्णय गर्ने खुबी राख्नेछन् ।
२०७३ चैत्र २९ गते ।